Lemak’I Marovoay no ivotoeram-pamokarana Vary jeby mahavokatra tsara | Région Boeny
Ho fanatanterahana ny politikam-panjakana mikasika ny fampandrosoana sy fanatsarana ny vokatra Vary jeby ato amin’ny faritra Boeny, dia niantso mpanao gazety tao amin’ny biraony ny Lehiben’ny faritra, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, ny Talata 29 mey 2017 mba hampahafantarany ny ezaka atao aty an-toerana amin’ny fambolem-bary taona 2017. Niara-nanazava izany taminy ny Talem-paritry ny fambolena sy fiompiana eto Boeny.
Ny tanjona dia mba ho fanentanana ireo tantsaha hamboly Vary jeby ary hahazo vokatra tsara sy hialana amin’ny tsy fahampiam-bary any amin’ny lemak’i Marovoay, any amin’ny distrikan’I Mitsinjo sy Soalala ary Mahajanga II kanefa ny fambolem-bary dia anisan’ny seha-piariana ato anatin’ny faritra Boeny.
Ny lemak’i Marovoay dia ivo-toeram-pamokaram-bary jeby tena tsara izay itodihan’ny mpamatsy vola. Natao izany mba ahatrarana ny vina napetraky ny fitondram-panjakana dia ny hampitombo avo roa heny ny voka-bary amin’ny taona 2020.
Manoloana izany dia efa niroso tamin’ny fanampiana ny tantsaha ny Ministera mpiahy, toy ny fivarotana ny ambioka sy zezika amin’ny vidin’ny mirary ary ny fizarana ny fitaovam-pamokarana toy ny herse, charrue, sarcleuse mba hanamorana ny asan’ireo tantsaha.
Efa misy ihany koa ny fiaraha-miasa tamin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena amin’ny alàlan’ny tetikasa PURSAPS sy PHRD ary BVPI izay vatsin’ny banky iraisam-pirenena vola. Tafiditra amin’izany ny fanajariana ny lakandrano mirefy 4 500 km izay simba sy tototry ny fasika ka ireo tantsaha nisitraka izany dia nahatratra 3 690 tao Marovoay.
Vondron’ny tantsaha miisa 2038 no nahazo tombotsoa raha atambatra amin’ny fokontany maromaro tamin’ity taona 2017 ity tao Marovoay.
Tsy very anjara amin’izany ihany koa ny ao amin’ny Kaominina ambanivohitr’I Bekobay distrikan’i Mahajanga II, hoy ny Lehiben’ny faritra namarana ny fanazavany. Satria efa misy asa mandeha any an-toerana ankehitriny, amin’ny fanamboarana lakandrano manondraka velaran-tany 957 hekitara ary miisa 2 011 ireo mpahazo tombotsoa amin’izany.